WOWOW jikada Fukeet Madaxiyaasha G1 / 2 Xiriyaha
Bogga ugu weyn / accessories / Qalabka Fudeetada / WOWOW Jikada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka G1 / 2
Hilib-gooye wuxuu leeyahay astaamaha burburka, xoqida iyo xasaanada, taas oo loo isticmaali karo muddo dheer. Kaamil ah makhaayadaha, goobta dalxiis, iyo isticmaalka hoyga.
OGAYSIIS ka hor Iibsiga:Madaxa qasabadani 5001 wuxuu KELIYA u yahay isku xira G1 / 2 (MALE) (Qiyaastii 2 cm ama 0.8 inji), Ma ahan NPT, Maaha mid guud
Aqoonsi sarre: Bedelka madaxa qasabada qasabada wuxuu ka sameysan yahay balaastik heerka injineernimada ah (ABS) iyo aaladaha hawada ee Neoperl oo la dhisay, waxaa loo isticmaali karaa waqti dheer inta lagu jiro isticmaalka maalinlaha ah, dhamaadka nickel-ka la cadeeyay ayaa ah mid ka hortaga miridh-ka isla markaana aan lahayn faro-qaadis.
3 Habka SHAQADA: Biyaha qulqulaya ee joogtada ahi waxay bixiyaan qulqulka & fudfudud socodka, malahan buufin; biyaha buufinta ayaa ku nadiifin kara khudradda ama miraha qunyar socod ah, qulqulka ka hortagga cayayaanka iyadoo aan waxyeello gaarin; qaabka biyaha aqua blade / qaabka wax lagu nadiifiyo ayaa si fudud oo dhaqso leh xaaqi kara saxamadaada
SAHAL IN LA SIFO:Aerator-ka tayada sare leh ee ABS si fudud ayaa looga furi karaa qadaadiic, biyo adag iyo cabir la'aan, wuxuu ilaaliyaa isticmaalka nolosha iyo biyaha
DARYEEL, TAAGEERADA Macaamiisha: Dammaanad-qaadasho 2-sano ah iyo taageerada macaamiisha ayaa la siiyaa. Waxaa daboolay 90-maalmood oo lacag la’aan ah.
Isku halaynta waxaa lagu nuuxnuuxsaday qaab dhismeedka Means of vinyl raagaya, iyadoo lagu dhammeeyo casri casri ah oo dhalaalaya Nickel
Qaab dhismeedka waara - dhismaha balaastigga ah ee waara wuxuu bixiyaa waxqabad la isku halleyn karo iyadoo la adeegsanayo dhamaadka nalka Nickel si loo adkeeyo miridhku ama daxalka.
SKU: 5001 Categories: Qalabka Fudeetada, accessories Tags: Birta buufiya, Nolol xoqid, tubada
WOWOW Qalabka birta aan xiiranayn ee gacanta ku haya matoorka madow ...
La iibiyey: 1
WOWOW Pop Up Mount Rod Assembly
Qolka Musqusha ee dahabka ah ee WELOW Dharka Dahabka ah ee loo yaqaan 'Towel Bar'
La iibiyey: 57